Njirimara na ịdị mkpa nke tropopause | Network Meteorology
Ihe niile anyị na-akpọ meteorology na dị iche iche ụdị ihu igwe ha na-eme na troposphere. Nke ahụ bụ, na naanị otu n'ime oyi akwa nke ikuku. Uzo a bu ikuku nke ebe anyi bi na nke nwere njedebe ya n’agbata kilomita iri na iri na isii. N'elu mpaghara a ka stratosphere. Ogo nke akara akara abụọ bụ tropopause. Nke a bụ isiokwu nke isiokwu a.
Tropopause nwere njirimara dị iche n'etiti ọkwa ọ na - ekewa ma ọ bụ ya na - eme ka ihu igwe dị elu. Na nke a, anyị na-agwa gị ihe niile banyere tropopause.
2 Pesdị tropopause dị ka ịdị elu na latitude
4 Phenomena kpatara nsogbu
Ọ bụ a discontinuous ebe n'etiti troposphere na stratosphere. Dị ka anyị maara nke ọma, troposphere bụ ebe dị iche iche ụdị igwe ojii mmiri na-ezo. N'elu oyi akwa a, njirimara, mejupụtara gas na ihe ndị ọzọ nke ikuku na-agbanwe kpamkpam. Dịka ọmụmaatụ, na stratosphere bụ ama ama ozone oyi akwa Ọ na-echebe anyị pụọ na ụzarị anyanwụ na-emerụ ahụ.
The tropopause bụ onye na-egosipụta akara elu nke ọnụnọ nke alụlụ mmiri n'ikuku. Site na ọkwa a dị elu, ikuku ekpochapuwo. Otu n'ime njirimara nke oke a na-anọchi anya ya bụ na ọ na-eche ntụgharị ihu igwe. Nke ahụ bụ, ọnọdụ okpomọkụ dị na stratosphere na-abawanye na ogo kama ịbelata. Nke a na - eme ka ikuku ikuku niile kwụsị na mgbakwunye na ike nke ikuku na - enweghị ntụ nke stratosphere.
Na ọnọdụ okpomọkụ gradient nke mmụba nke ntụgharị ihu igwe dị ogo 0,2 kwa mita 100. N'adabaghị na nkwenkwe ndị mmadụ, tropopause abụghị akwa na-aga n'ihu. Dị nnọọ iche. Ka anyị na-aga n’etiti oke ikuku na ebe okpomọkụ, anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ezumike n’akụkụ abụọ ahụ. The ịmata ihe banyere ya bụ na ndị a ruptures adaba na trajectories na ugbo mmiri jet.
Oghere ndị dị na tropopause na-ekwe ka ozone dị na stratosphere na ezumike ikuku ndị ọzọ banye na troposphere. Valueskpụrụ elu nke tropopause na-agbadata na mpaghara ndị sitere na equator ruo okporo osisi. Otú ọ dị, ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye na elu.
Pesdị tropopause dị ka ịdị elu na latitude
Dabere na mgbanwe ihu igwe na ihu igwe n'oge ọ bụla, ogo nke tropopause dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị elu mgbe enwere anticyclones na akwa dị ala ma ọ dị ala mgbe ịda mbà n'obi ma ọ bụ oke ifufe. Ọnọdụ okpomọkụ ahụ na-agbanwe dabere na latitude ebe ị nọ. Enwere mpaghara ebe ọ dị -85 Celsius C na mpaghara ndị ọzọ na -45 Celsius C.
N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịmata ọnọdụ atọ dị iche iche ma ọ bụ ụdị tropopause atọ, dabere na mpaghara ebe ọ dị yana latitude na elu.
Pịnye 1 ma ọ bụ nkịtị Ọ bụ otu nke nwere ọnọdụ ọnọdụ kachasị. Enweghị ikpo ọkụ ma ọ bụ oyi na troposphere.
Pịnye 2 ma ọ bụ H a na-akpọkwa ya nnukwu tropopause. Ọ bụ nke na-egosi mgbe enwere ụdị advection na-ekpo ọkụ na mpaghara elu na nke etiti nke troposphere. Nke a na-emekarị na ọnụnọ nke anticyclones na-ekpo ọkụ.
Pịnye 3 ma ọ bụ S. A makwaara dị ka sunken. O kwekọrọ na mgbe advection oyi na-amalite na akwa elu nke troposphere na ndị ọzọ na-etolite mgbe enwere mpaghara nke obere nrụgide na akwa ala.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, akara a nke na-ekewa mbara igwe abụọ dị oke mkpa maka ndụ n’ụwa. Ihe mbụ bụ na ekele maka nkwụsi ike ọ na-enye na ọkwa dị elu, ndị ama ama cirrus ojii.
Na-arụ ọrụ dị ka mmiri mmiri, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịchekwa ọtụtụ alụlụ mmiri na oke ala ya site na mpaghara ebe okpomọkụ. Ọtụtụ ogige ndị dị na njedebe a na-arụ ọrụ nke ọma ịghọta mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na otu ọ ga-esi emetụta ụwa. Nke a bụ otu esi echepụta atụmatụ ndị ọzọ iji belata ụfọdụ mmebi dị egwu nke ihe ahụ kpatara.
Thegwé ojii nke na-eru tropopause site na convection na-akwụsị ịkwụsị ọ dị ka a ga-asị na ha gafere n'ime mgbidi iko. Ekwela ka igwe ojii na-ese n’elu mmiri ebe ọ bụ na ọ na-ewepụta otu njupụta dị ka ikuku gbara ya gburugburu. Ọnọdụ na-abụghị nke a pụtara n'okpuru tropopause, ebe ikuku nwere ịba ụba nke na-enye ya ohere ịkwali na elu. Oké ifufe kachasị ike na troposphere na-ada ụfọdụ ígwé ojii n'elu tropopause.
Phenomena kpatara nsogbu
Enwere ụfọdụ ihe ịtụnanya na-eme n'ihi ịdị adị nke oke a. Anyị ga-enyocha ha otu otu.
Nke mbu bu na, dika ogugu CO2 na abawanye, ha na-eme ka ọnụọgụgụ nke ngwakọta nke mkpụrụ ndụ na ikuku ndị ọzọ dị ka nitrogen na-abawanye. N'oge nsogbu ndị a, enwere mmetụta nke ume ike na ọ bụ mgbe a na-emepụta ihe a maara dị ka infrared radiation. Ọ bụ ụdị radieshon nke dị na ụdị electromagnetic ma nwee ogologo ntụgharị. Nke a na-eme ka okpomọkụ dị.
Mgbe nke a mere, enwere mgbanwe dị mfe nke okpomọkụ na mpaghara troposphere nke na-eme ka okpomọkụ dị elu. Ọ bụrụ na ihe a ewere ọnọdụ na stratosphere, radieshon infrared nke emepụtara nwere ike ịgbanahụ ohere, ebe enwere ikuku dị ala. Site n’inwe ntakịrị njupụta, ikuku na-enwe ike ime ka elu ikuku kacha elu.
Ihe nke abuo nke neme site na tropopause bu na Ọ na-eme site n'ịbawanye ụba CO2. N'okwu a, ọ na-etinye okpomọkụ nke sitere na ala ma nwee mmụba na ọnọdụ okpomọkụ na akụkụ ala nke ikuku. N'ihi ya radieshon na-eru ọkwa kachasị elu.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere tropopause.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Nsogbu